LEGO Santa's Visit သည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှစ၍ အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးထားသော Xmas set ဖြစ်သည်
10 / 09 / 2021 10 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 219 Views စာ0မှတ်ချက် 10199 Winter Village ကစားဆိုင်, 10275 Elf ကလပ်အိမ်, 10293 Santa's ခရီးစဉ်, 40499 Santa's Sleigh, 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon, 75252 မှာ Imperial စတား Destroyer, ခရစ် McVeigh, ခရစ္စမတ်, Lego, Lego Star Wars, LEGO.com, ဆန်တာကလော့စ်, Star Wars, အဆိုပါ LEGO Group
အသစ် - ထုတ်ဖော်ပြသ ၁၀၂၉၃ ဆန်တာ၏လည်ပတ်မှု အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးဖြစ်သည် Lego Winter Village ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၀၁၉၉ Winter Village Toy Shop မှအနည်းဆုံးယူကေတွင်ရှိသည်။
၁,၄၄၅ ပြားအတွက်ယူရို ၇၉.၉၉ ဖြင့်သာရောင်းချနိုင်သော်လည်းယခုနှစ်ရာသီအလိုက်စာသားအပြင်စျေးနှုန်းတစ်ခုလျှင် ၅.၅ pence သာရှိသည်။ ၎င်းသည် Winter Village Collection၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၏ ၁၀၁၉၉ Winter Village Toy Shop တွင်ပထမဆုံးသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်လိုက်ဖက်သောတန်ဖိုးတစ်ခုသာဖြစ်ပြီးယခင်နှစ်ကထက်သင်၏ ၀ င်ငွေထက်အဆပေါင်းများစွာပိုကောင်းခဲ့သည်။ 10275 Elf ကလပ်အိမ်.
အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအစုံသည်ပေါင် ၈၉.၉၉ ဖြင့် ၁.၁၉၇ တွင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်အသစ်စက်စက်ပုံသွင်းထားသောသမင်အုပ်၏အကျိုးဆက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ အလွန်အမင်းတောင်းဆိုထားသောတိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကိုသာဤအစုတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်၊ သို့သော်သင်မကြာမီသေတ္တာတစ်လုံးတွင်လေးကောင်ဖမ်းနိုင်လိမ့်မည်။ 40499 Santa's Sleighဗြိတိန်တွင်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ပေါင် ၃၀ ခန့်စျေးနှုန်းရှိသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ စျေးနှုန်းတစ်ခုချင်းစီဟာစျေး ၀ င်ဖို့ကောင်းပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး Lego အစုံ: ထို p များ၏အရွယ်အစားarts (နှင့်ပလပ်စတစ်၏အလေးချိန်ကိုတိုးချဲ့ခြင်း) သည်ညီမျှခြင်းထဲသို့အချက်များအားဖြင့်သက်သေပြသည့်အတိုင်းညီမျှခြင်းထဲသို့အချက်များဖြစ်သည် 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon နှင့် 75252 မှာ Imperial စတား Destroyerမရ။ ၎င်းတို့နှစ်ခုလုံးသည်ယူကေ၌ ၆၄၉.၉၉ ဒေါ်လာနှင့်ညီမျှသောစျေးနှုန်းတံဆိပ်များကိုသယ်ဆောင်လာသော်လည်း ၂.၇၅၇ အပိုင်းအခြားဖြင့်ယခင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၀၁၉၉ ဆောင်းရာသီရွာအရုပ်ဆိုင်
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကန့် 10275 Elf ကလပ်အိမ်.
ဒါပေမယ့်စိတ်ထဲမှာရှိနေတာတောင် ၁၀၂၉၃ ဆန်တာ၏လည်ပတ်မှု နှိုင်းယှဉ်ဈေးဆစ်ခြင်းနှင့်တူသည်၊ ပြောင်းပြန်ထောင့်တစ်လျှောက်တည်ဆောက်ထားသောအရွယ်အစားကြီးအိမ်တစ်လုံး (ဒီဇိုင်နာ Chris McVeigh ၏ထင်ရှားသောဂျီ ometric မေတြီပါရမီအစိပ်အပိုင်းတစ်ခု) ရုံဖြတ်ပြီးမှား) ၎င်းကို၎င်း၏ Santa Claus minifigure အတွက်၎င်း၏ပုံစံနှစ်ချောင်းပုံသွင်းထားသောခြေထောက်များနှင့်၎င်း၏ Christmas tree အတွက်အုတ်တစ်ချပ်ဖြစ်သည်။
သို့သော်ငြားလည်း, ၁၀၂၉၃ ဆန်တာ၏လည်ပတ်မှု 40499 Santa's Sleigh မပါဘဲပြီးပြည့်စုံတယ်လို့မခံစားရသလောက်ဘဲ၊ အနီရောင်အဟောင်းကဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲ။ -ထို့ကြောင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဆောင်းရာသီရွာအတွေ့အကြုံအတွက်အမှန်တကယ် ၀ ယ်ယူခြင်းသည်ယူရို ၇၉.၉၉ / ဒေါ်လာ ၉၉.၉၉ / € ၈၉.၉၉ ထက်အနည်းငယ်ပိုမြင့်သည်ကိုသင်ခံစားရနိုင်သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ယူကေမှာယခင် ၅ ဆောင်းဈေးထက်ပိုသက်သာသောအခြေခံစျေးသည်ကောင်းသောစတန့်တစ်ခုဖြစ်သည်arting point ။
သင်ရွေးနိုင်လိမ့်မယ် ၁၀၂၉၃ ဆန်တာ၏လည်ပတ်မှု သင် VIP အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လျှင်စက်တင်ဘာ ၁၆ မှသို့မဟုတ်အောက်တိုဘာ ၁ မဟုတ်လျှင် ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ Chris McVeigh ထံမှနောက်ဆုံး Winter Village set အကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်
← LEGO သည်ပေါက်ကြားမှုများကိုနှိမ်နင်းရန်လျှို့ဝှက်ညွှန်ကြားရေးမှူးတစ် ဦး ကိုငှားရမ်းနေပါသည်
LEGO Winter Village Collection 10293 Santa's Visit ၏ပထမဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များအွန်လိုင်းပေါ်ရောက်လာသည် →